Posted by သက်ဝေ at 11:50 PM
ကြည် April 27, 2010 at 1:44 AM
အချဉ်တော့ကြိုက်တယ်..ဒါပေမဲ့ သက်ဝေလောက်တော့ မကြိုက်ဘူးလားလို့။ အသင်းဝင်ပါမယ်။ သံပုရာသီးလိုချင်လို့ပါ )))))း
Anonymous April 27, 2010 at 2:18 AM
အသင်းဝင်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်က အနီရောင် ဆိုးထားတဲ့ ငရုပ်ဆီဝယ်ခိုင်းတာ အိမ်ကလူတွေက chit to ပုလင်းကြီး ၀ယ်ပေးလိုက်လို့ စိတ်တွေဆိုးလိုက်ရသေးတယ်၊ နောက်တော့မှ အဖေကိုယ်တိုင် မြို့ပတ်ရှာလိုက်ရတယ်၊ အဲဒါလေးကို ရွှေရသလို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ကုန်သွားမှာစိုးလို့ ချွေစားနေရတယ်၊ ရွှေဘဲက ဘဲကင်နဲ့ စားတဲ့ ငရုပ်ဆီကိုလဲ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်၊
Nge Naing April 27, 2010 at 6:00 AM
အချဉ်ကြိုက်သူများ အသင်းဖွဲ့ရင် ပါမယ်နော့်။
T T Sweet April 27, 2010 at 6:42 AM
အသင်းဝင်မ၀င်တော့မသိ ... ဖတ်ရင်းနဲ့ သွားကျိန်းထှာ ... ကျိန်းပါတယ်ဆိုမှ သူကသံပုရာသီးနဲ့တောင် အဆုံးသတ်လိုက်သေး ...
အလကားနောက်တာနော်။ နဲနဲတော့ ကျိန်းပါတယ်း)))
ဂျပန်ဆိုင်က ဂျင်းချဉ်ကြိုက်တာတော့တူတယ်။ ကော်ပြန့်နဲ့စားတဲ့ အချဉ်လဲ ကြိုက်ပါတယ်။
Anonymous April 27, 2010 at 7:16 AM
အချဉ်တော့ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အချဉ်ထုပ်။ ဇီးသီး မက်မန်းသီး သရက်သီး သံပုရာသီး။ နဲ့ အချဉ်ထုပ်ပေါင်းံစုံ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်ကလုပ်တဲ့ အချဉ်ပဲစားရတာ။ ဆေးနီတွေပါလို့။
Anonymous April 27, 2010 at 8:27 AM
မသက်ဝေ...19လမ်း ကြေးအိုးဆိုင်က ငရုတ်ဆီနီနီ အချဉ်ရည်ကို စားရင်း အားမရလို့ မော့သောက်ဖူးတဲ့အထိကြိုက်တယ်။ ကျန်းမာရေးအရ မကောင်းမှန်းသိလဲ ...မမုန်းနိုင်
း) အချဉ်ရည်အသင်းဝင်တင်မဟုတ် ကော်ဖီအသည်းစွဲ ကြိုက်တဲ့အသင်းပါ ဖွင့်မယ်ဆို..ထိပ်ဆုံးက အသင်းဝင်ဖို့ အဆင်သင့်။
စုချစ် April 27, 2010 at 8:33 AM
အမ... အချဉ်ကြိုက်သဆို နောက်တခါ အိမ်မှာ ကင်ချီဖေါက်ဖြစ်ရင် ပေးလှဲ့မယ်...
Thant April 27, 2010 at 9:13 AM
အချဉ်...မီးမီးကြောက်ကြောက်.... ဆူရှီဆိုင်က ဂျင်းချဉ်တော့ကြိုက်တယ်....အင်းလေးက အချဉ်အချိန်ရရင်သွားစားဦးမယ်... :)
မေဇင် April 27, 2010 at 9:54 AM
:) အချည်လေး ပါရင် ထမင်းစားမြိန်တာတော့ အမှန်ပဲ။ မကြာခဏ လုပ်စားဖြစ်တာတော့...ကြက်သွန်ကို ပါးပါးလှီးပြီး ငရုပ်သီးစိမ်း နဲ့ ဆားထည့် ၊ သံပုရာရည်ညစ်.. ၊ ဒါမှ မဟုတ်..ကြက်သွန် ကို အပေါ်က ငရုတ်ဆီ ဆမ်းလိုက်တဲ့ အချည်။ အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ မလုပ်ဖူးပါ...မမသက်ဝေ ရေးသွားတဲ့ မန်ကျီးချဉ် လေးကို လုပ်ပြီး အကြော်နဲ့ စားဦးမယ်။း))
Vista April 27, 2010 at 10:06 AM
အချဉ်ကြိုက်သူများ အသင်းဝင် အမာခံ ဂိုဏ်းသူလေးလာပါပီခင်ဗျာ။
မသန့် လို့ ကိုယ်တိုင်ကျိုပေးတယ်။ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။
အဲဒီအချဉ်နီနီလိုမျိုးကိုနည်းနည်းပဲထည့် ၊ ထန်းညက်လေးတစ်ခဲ၊ မန်ကျည်းရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငြုပ်သီးစိမ်းထောင်း၊ ဆား ထည့်ပီးမှ ကျိုထားပေးတာ ။ဘူးနဲထည့်ထားအကြာကြီးအထားခံတယ်။
မာသားဆီချက်ခေါက်ဆွဲလုပ်ကျွေးရင် ခေါက်ဆွဲပေါ်ကိုလောင်းချပီးစားတာ ။
အချဉ်မပါရင်ထမင်းမစားဘူး ၊မသက်ဝေနဲ့ တူတူပဲ။ ကျနော်ကတောင်ပိုဆိုးအုံးမလားလို့ ။
စားစရာမရှိရင် သံပုရာသီးကိုပါးပါးလှီးပြီး ဝါးစားတာ။
ဂျပန်ဆိုင်က ဂျင်းချဉ်ရော အသားစိမ်းနဲ့ တို့ စားတဲ့ အချဉ်ရော အရမ်းကြိုက် ၊ အရင်အလုပ်က ဂျပန်MD ကဆို ဂျပန်ကပြန်လာတိုင်း အဲဒီဂျင်းဘူးလိုက်ရယ် ၊ အသားနဲ့ တို့ စားတဲ့အချဉ်ရယ် ပုလင်းလိုက်ဝယ်လာပေးတယ် ၊ စားစမ်းတဲ့။ဟိဟိ။
သူတို့ နဲ့ ညစာစားတိုင်းကျနော်က အဲဒါတွေအရမ်းစားတာကိုး။
အိမ်မှာကိုကိုရော ကျနော်ရော အချဉ်အရမ်းစားတာ။
“ အချဉ်မကြိုက် လူမိုက် “ ။ဟက်ဟက်။
ပုံရိပ် April 27, 2010 at 10:33 AM
အကြိုက်တူတွေ လာတွေ့နေပြီ အစ်မရေ။ ဆူရှီက ချင်းဖတ်လေးတွေ ပုံရိပ်လည်း ကြိုက်တယ်။ ဂျင်းအချဉ်ထုပ်နဲ့ ဆင်လို့ ထင်တယ်။ ကော်ပြန့်အကြော် အစိမ်းနှစ်မျိုးလုံးကို အချဉ်ရည်ရွှဲရွှဲ ဆမ်းပြီး စားရမှ ကြိုက်တယ်။ အတူတူပဲ။ ဘာမှ မရှိရင် ကြက်သွန်နီကို အကွင်းလိုက်လှီးပြီး သံပုရာသီး ညှစ်၊ ဆားဖြူးပြီး အချဉ်လုပ်စား လိုက်တယ်။
khin oo may April 27, 2010 at 11:15 AM
ကြက်သွန်နီငရုတ်သီးစိမ်းပါးပါးလျှီးထားတာနဲ့။ရှာလကာရည်ကလေးဆမ်းထားတကိုကြိုက်ပါတယ။် ရှာလကာရည်ကို Ntuc မှာ အဂ်လိပ်လိုမပြောတတ်လို့ မဝယ်တတ်တာနဲ့သ့ပုရာသီးညှစ်ပြီး စားပါတယ။် ခြောက်လတစ်ခါလောက်ပေါ့။
ချစ်ကြည်အေး April 27, 2010 at 12:37 PM
ရှာလကာရည်=Vinegar လေ မမ....:)
myo April 27, 2010 at 12:52 PM
myo: မမသက်ဝေပို့စ်ကို စဖတ်ဖတ်ခြင်းသွားကျိန်းတယ် ပြိးတော့ သားရည်ယိုတယ် ပြီးတော့ ပြီးတော့ ကွန်မန့်တွေ အီး ချဉ်လိုက်တာ..
ရွှေဂျမ်း April 27, 2010 at 2:06 PM
အမရေးပြတာတွေ ဖတ်ရင်း ဗိုက်ဆာလာပြီ။း( ရန်ကုန်က အစားတွေ လွမ်းပါတယ်ဆိုမှ ဒါဖတ်မိတာ ပိုဆိုးသွားပြီ။
nu-san April 27, 2010 at 4:25 PM
အချဉ်ရည်ဆို ကြိုက်မှကြိုက်ပဲ.. အသင်းဝင်တယ် အမ.. မော့တော့ မသောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်..:D ကြေးအိုးနဲ့ဆို ငရုတ်ဆီ နီနီနဲ့ အချဉ်ရည်ပဲ စားတယ်.. အဲဒီလို အချဉ်ရည်နဲ့စားမှ စားရတာ အရသာရှိတာ..မတည့်ဘူး ဆိုးဆေးပါတယ်ပြောပေမယ့် နည်းနည်းတော့ စားရမှ ကျေနပ်တယ်... မစားရရင် မနေနိုင်ဘူး… အမရေ.. ကျနော့် အမေဖျော်ပေးတဲ့ အသုပ်ထဲထည့်စားတဲ့အချဉ်ရည်နည်းကို မေးလ်ပို့လိုက်မယ် သိလား.. သံပုရာသီးတော့ မလိုချင်ဘူး... ရှောက်သီးဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်.. အဟိ.. ဒီမှာ ရှောက်သီးမရှိလို့.. :P
Anonymous April 27, 2010 at 5:26 PM
Suki sauce recipe
2. salted soya bean paste (ဆီတိုဟူး) .can buy in NTUC.
3. ground peanut. (NTUC - see on cake accessories shelves)
ချစ်ကြည်အေး April 27, 2010 at 6:56 PM
ဟေ့ ငါတို့က အမေ့ဗိုက်ထဲမှာ မမွေးခင် ကတည်းက ရှောက်သီးအလုံးလိုက် ချဉ်ချင်းတပ်လို့ အမေက စားပေးရတာနော်...ဒါပေမဲ့ အသင်းမဝင်ဘူး သံပုရာသီးတလုံး နဲတယ်...။
အချဉ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီး ၄င်းနှင့် လိုက်ဖက်သော အစာအာဟာရတခွက် နှင့် တွဲဖက်ချက်ကျွေးလျင် စဉ်းစားမည် ဖြစ်ကြောင်း... :)
min April 27, 2010 at 8:06 PM
Min ( Another Min) April 27, 2010 at 8:27 PM
Hi Ma Nu San,
Please publish in comment if it is notasecret recipe.:)
ဇွန်မိုးစက် April 27, 2010 at 10:02 PM
ဇွန်လည်း အချဉ်သိပ်ကြိုက်တာ။ အချဉ်ရည်ရော၊ အချဉ်ထုပ်ရော အကုန်ကြိုက်။ ငယ်ငယ်ကဆို သွားတွေကျိန်းတဲ့အထိ စားပစ်တာ။ အချဉ်စားစရာမရှိရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ သံပုရာသီးလှီးပြီး စားခဲ့သေးတယ်။း)) ဂျပန်စာနဲ့တွဲစားရတဲ့ ဂျင်းဖတ်လေးတွေနဲ့ အချဉ်လည်းကြိုက်တယ်။ အသင်းဝင်ပါမယ်မမ။ ဒါပေမဲ့ အစ်မချစ်နဲ့အတူ ထောက်ခံပါတယ်။ သံပုရာသီးတစ်လုံးဆို နည်းတယ်နော်။ နောက်ကတွဲဖက်လေး တစ်ခုခုပါမှ ... အဟက်း)
သက်ဝေ April 27, 2010 at 11:21 PM
အချဉ်အကြောင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အားပေးသွားကြသူတွေ၊ အချဉ်ကြိုက်သူများ အသင်းဝင်မယ့်သူတွေ၊ အချဉ် Recipe ပေးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ အကြိုက်ချင်း တူကြတဲ့ ညီအမ တတွေကို
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်...။ ကိုယ်လိုလူတွေ အများကြီးဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ တကယ်ကိုပဲ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိပါတယ်...။
အချဉ်မကြိုက် လူမိုက် ဆိုတဲ့ စကားကလဲ ရှိနေတယ်မဟုတ်လား...း))
ကော်မန့်တွေဖတ်ရင်း တွေးနေမိတာ တခုက ယောင်္ကျားလေးတွေ အချဉ် ကြိုက်ပုံ မရကြဘူး ဆိုတာပါပဲ...။ အခါးကြိုက်သူများ အသင်းဖွဲ့ရင်တော့ ရောက်လာကြမလား မသိ...း))
Hmoo April 28, 2010 at 5:17 AM
ကြည့် လုပ်...ဖြုပ်.. ကလေးလဲတွေလာနားနေဦးမယ်...
SHWE ZIN U April 28, 2010 at 10:32 AM
အချဉ်တော့ ကြိုက်ပါတယ် မသက်ဝေ ပြောတဲ့ အချဉ်နီနီ တွေတော့ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး မန်ကျီးမှည့် ကြက်သွန်ဖြူ နံနံပင် ချဉ်လေး ကိုတော့ ကြိုက်ဆုံးဘဲ
Moe Cho Thinn April 29, 2010 at 7:10 AM
အချိုကြိုက် အဖွဲ့ရော မဖွဲ့ကြဘူးလားဟင်။ အချဉ်မကြိုက်..လို့ မပြောရဲပါကြောင်း။ ၀ိုင်းချဉ်ကြမှာစိုးလို့.. :)
sonata-cantata April 29, 2010 at 5:37 PM
သံပုရာသီးတလုံး နဲ့ ဝေးရပါပြီ ဝေ
အမလဲ အချဉ်ကြိုက်တယ်.. ထမင်းစားရင် အချဉ်မပါရင်ကို မစားတတ်ဘူး။ သက်ဝေကြိုက်တဲအချဉ်နီနီက ဆန်မှုန့်ရယ်ရှာလကာရည်ရယ် ဆိုးဆေးတွေ ကြာကြာခံအောင် ထည့်တဲ့ဆေးတွေ ထည့်ထားတာ။ အဲဒါတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး ကျန်တဲ့အချဉ်တွေ အကုန်စားတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းက မရမ်းသီးပေါင်းကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ် ။ ခု အဲလိုမျိုး ပေါင်းထားတာ ဘယ်မှာမှ မတွေ့တော့ဘူး စားချင်လိုက်တာ ပြောနေရင်းနဲ့...။ ဒီနေ့ အိမ်မှာ သရက်သီးကြော်စားတယ် သိလား။
rose March 15, 2011 at 12:48 AM
အစ်မသက်ဝေ ညွှန်းလို့ လာဖတ်တာ ပို့စ် အပောာင်းလေး ပဲနော်။ ပီားးပိာ ဖတ်ရင်း ရယ်မိတာ အခါခါပဲ။ အစ်မက အချဉ်ရည်ကို မော့သောက် လောက်တဲ့ အထိ ကြိုက်တာကိုး။ ရို့စ် အချဉ်ရည် လုပ်ရင်လေ ဒီက ထိုင်းဆိုင် အာရှဆိုင်တွေက ကြက်ဖ တံဆိပ် စပ်စပ် အနီရောင် အချဉ်ရည် ပြစ်ပြစ် တစ်ဗူး ၀ယ်တယ်။ ပြီးတော့မှ အိမ်မှာ စိတ်ကြိုက် ပြန်စပ်တယ်။ မန်ကျည်းသီးရည်လေးနဲ့ အဲ့ ဗူးထဲက အချဉ်ရည်ရယ်၊ သံပုရာသီးလေး ညှစ်ထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီး၊ နံနံပင်လေး ထည့်လို့ မြန်မာပြည်က အချဉ်ရည် အတိုင်းပဲ အပာုတ်း)))